Ukufumana okuninzi kwiMveliso yakho ngeNtwasahlobo-iBhanki yokutya yaseGalveston County
admin Aprili 18, 2019 0 Comment Imfundo yezondlo
Intwasahlobo isemoyeni, kwaye uyazi ukuba kuthetha ntoni oko, iziqhamo kunye nemifuno! Ukuba uhlahlo lwabiwo-mali, ngoku lixesha lokuthenga iimveliso zonyaka.
Ungaqaphela ukuba ezi zinto zivelisayo zitshiphu ngexesha lasentwasahlobo:
Ierberberries, amaqunube amnyama, iiblueberries, iipesika kunye neeplamu; iitumato, umbona, iletesi, isikwashi, iminqathe nokunye!
Nazi ezinye zexesha eliqhelekileyo ngokuchasene namaxabiso exesha onokuthi uwabone:
Ierberberries: $ 0.99- $ 1.99 / lb vs. $ 3-4
Amaqunube amnyama, irabheri kunye neeblueberries: $ 0.88- $ 0.99 vs. $ 2- $ 4
Iipesika kunye neplums: $ 1- $ 1.50 / lb vs. $ 3- $ 4
Utamatisi: $ 0.68- $ 0.88 / lb vs. $ 1- $ 1.25
Ezinye iingcebiso zokuthenga iimveliso zonyaka:
1. Thenga iphepha langaphambili leentengiso zentengiso: Imveliso engabizi kakhulu ihlala ikwixesha lonyaka.
2. Funda amaxabiso kunye nohlobo lwemveliso oyithandayo.
3. Xa amaxabiso enyuka, oko kuhlala kungumqondiso wokuba imveliso izakuphuma ngaphandle kwexesha.
4. Bambelela kwimveliso yonyaka okanye imveliso ehlala ihlala malunga nexabiso elifanayo kwaye kuya kufuneka uqaphele ukuba ugcina imali eyongezelelweyo!
Ngaba ujonge ukukhula kwimveliso yakho? Nazi ezinye iingcebiso zokonwaba:
Ukulima igadi akunzima (okanye kuyabiza!) Njengoko kuvakala. Uphendlo olulula lukaGoogle lunokubonelela ngemibono emininzi "yegadi ezilahliweyo". Olu hlobo lokulima igadi lusebenzisa iziqwenga zasekhitshini kwiziqhamo kunye nemifuno osele unayo. Zama kwaye wonwabe ngayo! Awudingi mbiza, ungasebenzisa amabhakethi amadala, iipani zekhekhe, iitoti ezincinci, okanye ezinye izitya ezindala ozibeke ecaleni. Isitshixo kukuqinisekisa ukuba nayiphi na ikhonteyina oyisebenzisayo ine-drainage elungileyo, ke kuya kufuneka wenze imingxunya emibini kuyo. Zama iivenkile zedola ngokubonelela ngexabiso eliphantsi lokulima igadi; bahlala bephethe imbewu, iimbiza, izixhobo, nangaphezulu nge $ 1 okanye ngaphantsi.
Kutshanje ndizamile ukubeka iingcambu zetswele eliluhlaza embizeni ngaphandle, kwiveki enye; ezi ziziphumo! Ukuphinda usebenzise kwakhona kunye nokukhulisa kwakhona iziqwengana zakho kunokukugcinela imali ukuba ufumana ngaphezulu kwesinye sokusebenzisa kwimveliso yakho. Usike nje izincamatheliso ukonwabele!
Zininzi ezinye izinto zemveliso ezinokulinywa kwizikhongozeli ezincinci, ezinje ngeetumato, ipepile, imifuno nokunye okuninzi. Abayi kuthatha indawo eninzi kwaye bafuna ulondolozo oluncinci; beka imbewu okanye izityalo zokuqala kwisitya sakho, amanzi njengoko kufuneka (ngesiqhelo kube kanye ngemini okanye ngaphantsi), kwaye uyibukele ikhula!
Okwangoku kwindawo yethu esi sisikhokelo sokutyala ngo-Epreli: Iimbotyi, iikhola, umbona, ukhukhamba, i-okra, ipepile kunye nokunye!
Khangela indawo yakho, ngamanye amaxesha kukho iiklabhu zokulima zasimahla, iiklasi, okanye igadi yoluntu enokukunika iingcebiso, ikunike indawo yokulima imveliso, okanye ikunike ithuba lokusebenza egadini.
egqithileyo ngeposi Previous: Ukuthenga "okusempilweni" kuhlahlo-lwabiwo mali lwe-SNAP
Okulandelayo elilandelayo: Ukutya okusempilweni ekuhambeni